Oomaar oo ku celiyey in ciidamada AMISOM aanay ka baxayn Somaliya inta laga helo ciidamo Somali ah oo buuxiya kaalintooda. – Radio Daljir
Muqdisho, May 06 | Wasiirka arrimaha dibedda ee Somaliya Maxamed C/llahi Oomaar ayaa maanta shir jaraa’id oo uu ku qabtay Muqdisho ka hadlay joogitaanka ciidamada AMISOM ee ka hawlgala Muqdisho, burcad badeeda, iyo taageerada bulshada caalamka ee dawlada federaalka ah ee Somaliya. Md. Oomaar waxaa uu sheegay in ciidama AMISOM aanay ka baxay Soamliya inta laga helayo bedalkood oo buuxin kara kaalintooda.
Md. Oomaar ayaa intaa ku daray in ciidamada AMISOM ay si sharci ah dalka ku yimaadeen, dawladana ay ka taageerayaan hawlaha amniga.
Muddo wax yari ka soo qareegtay ayaa hadal uu siiyeye saxaafada Md. Oomaar uu dhaliyey muran siyaasadeed oo ka dhex curtay madaxda dawlada Somaliyda oo aan isku aragti ka ahayn joogitaanka ciidamada AMISOM ee Muqdisho.
Md. Oomaar ayaa sidoo kale ka hadlay burcad badeeda ka ugaarata xeebaha Somaliya, sheeggayna in dhibka burcad badeeda ay ka mas’uul yihiin maraakiibta sida sharcida darida ah uga ugaarata xeebaha Somaliya, iyo sharikaadka sida sharci darida ah suna & qashinka warshadaha ugu quba xeebaha Somaliya.
Waxaa uu intaa ku daray in ay u gudbiyeen bulshada caalamka dacwado arrinta burcad badeeda ku saabsan, ayna ku rajo weyn yihiin in xal laga gaaro.
Waxaa uu dhaleeceeyey dawlada Eritrea oo uu ku eedeeyey in ay colaad ka hurinayso Somaliya, hub sharci darro ah ay soo galisay Somaliya, ayna taageerto kooxaha ka soo horjeeda dawlada Somaliya.
Md. Oomaar ayaa maalmo ka hor soo gaaray Muqdisho, horena safaro badan ku soo maray wadamada ay Somaliya deriska yihiin oo uu taageero uga raadinayey dawlada.